Murashax Madaxweyne Oo Sheegay Inuu ka Tanaasulay.
Mid ka mid ah 24-kii Murashax ee u taagnaa Doorashadda Madaxtinimadda ayaa ku dhawaaqay inuu ka tanaasulay Murashaxnimadiisa.
C/llaahi Cali Xasan oo ay isku hayb yihiin Murashax Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku dhawaaqay arrintaasi, kadib, markii uu soo saaray War-saxaafadeed uu ku caddeeyey sababaha uu uga baxay Tartanka Doorashadda.
Murashax C/llaahi Cali Xasan waxa uu ka mid ahaa 8-da Murashax ee Hadal-jeedinta maanta ku qoran, si ay Xildhibaanadda BFS uga iibiyaan Ajendaha ay ku hoggaamin doonaan dalka.
Ma cadda sababaha rasmiga ee uu isku casilay, waana Murashixii Labaad ee tanaasulay.
Ra’isul-wasaarihii hore ee DFKMGS, Prof. Cali Maxamed Geeddi ayaa ahaa Murashixii Madaxweyne ee ku dhawaaqa inuu tanaasulay, ka hor intaysan Murashixiinta bilaabin iunay bixiyaan Kharajka Is-diiwaan gelinta.
Prof. Cali Geeddi waxa uu u tanaasulay Murashax Madaxweyne C/qaadir Cali Cosoble oo ay isku hayb yihiin.
War-saxaafadeedka Murashax C/llaahi Cali Xasan ku sheegay iinuu tanaasulay ayaa u qornaa sidatan:-
Anigoo ah Eng. Cabdullaahi Cali Xasan waxaan Go’aan ku gaaray in aan ka tanaasulo u tartanka jagada Madaxweynimo ee Soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay 04.02.2017, tanaaulkeyga musharaxnimada Madaxweynaha wiuxuu ku saleysanyahay sababaha hoos ku qoran:
Markii aan qiimeeyay xaalada qalafsan ee dalku ku suganyahay iyo baahida loo qabo in la helo hoggaan karti leh oo dalka u horseeda dowladwanaag, amni iyo kala dambeyn, cadaalad, iyo horumar bulsho iyo mid dhaqaale.
Markii aan arkay in musharixiin gaaraya 24 ay isku soo sharaxeen in ay u tartamaan xilka madaxweyne ee dalka taas oo markhaati u ah jahawareerka siyaasadeed ee dalkeena ka jira oo aysan ka tarjumayn baahida dalkeena iyo dadkeena oo ku jira xaalada qalafsan ee siyaasadeed, amni, dhaqaale iyo bulsho.
Anigoo garowsan in is sharaxaadaydu aysan ku qotomin mar uun madaxweyne ha lagu yiraahdo oo ay daacad iga tahay Ilaah hortiisa in aan dalkeyga iyo dadkeyga ugu adeego si daacadnimo ah xil ama jago walba oo aan qabto,diyaarna u ah in amaanada ay umadaydo ii dhiibato aan u guto si daacadnimo ah oo Alle kacabsi leh.
Anigaoo la tashaday waxgarad badan oo Soomaaliyeed oo ka kooban qaybaha bulshada sida siyaasiinta, aqoonyahanada, dhallinyarada, haweenka, duubabka , odayaasha dhaqanka, ganacsatada iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa waxaan go’aansaday in aan tartanka madaxweynimo ka tanaasulo waqtigaan.
Waxaan mahad balaaran oo aan la soo koobi karin leh Ilaah subxaanuhu watacaalaa. Waxaan kale oo aan mahadcelin halkaan uga soo jeedinayaa taageerayaasheyda meel kasta oo ay joogaan dalka iyo dibada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan.
Sidoo kale musharixii ku guuleysta jagada madaxweynaha waxaan u soo jeedinaa in uu dalka daacad ugu shaqeeyo oo uu taarikhda baal dahab ah ka galo, jiilka soo socdana u reebo dhaxal wanaagsan”